BreakingNews: Dayniile oo heshay macluumaadkan ama warkan Maxamed Cabdulqadir Qaamey (Shakiib) | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii BreakingNews: Dayniile oo heshay macluumaadkan ama warkan Maxamed Cabdulqadir Qaamey (Shakiib)
Maxamed Cabdulqadir Qaamey (Shakiib). Qabiilkiisa waa Sheekhaal, Loobage. Hada waa Taliyaha Ilaalada Shacabka ee Degmada Howlwadaag. Wuxuu ka mid ahaan jiray Amiirada Alshabaab ee madaxda ka ahaan jiray amniyaadka Alshabaab ee dilalka qorsheysan ka fulin jiray magaalada Muqdisho. Isagoo dhaawac ah oo dagaalamaya ayaa laga soo qabtay suuqa Bakaaraha. Waxa lagu xiray xabsiga dhaxe. Halkaas ayaa laga soo saaray loona qaatay in uu ka mid noqdo Nabad Sugida. Hada wuxuu qaabilsanyahay sirqoolada iyo dilalka qorsheysan ee magaalada laga fulino. Waana nin ay ka baqaan saraakiisha kale. Shaqo ahaan wuxuu hoostagaa Taliyaha Ilaalada Shacabka Col Axmed Aadan. Taleefoonkiisuna waa: 0614431111.
Taliyaha Guud Ilaalada Shacabka waxa la yiraahdaa Col Axmed Aadan, Qabiilkiisu waa Mareexaan, wuxuu taliye hore ka ahaan jiray ciidanka Alfa Group ee Maraykanku tababareen, markiisii horena waxa laga soo wareejiyay Militariga.
Ilaalada Shacabka waa Ciidamo dharcad ah oo boqolaal ah, kuna hubaysan Bastoolado iyo Qoryaha meelaha fogfog wax ka dila (sniper gun). Waxay hoos tagaan taliska Nabad Sugida. Waana ciidamo Farmaajo u samaystay in uu wax ku laayo, waxayna u shaqeeyaan sidii Amniyaadka Alshabaab.
Previous articleMadaxweyne Waqtiigsa dhamaaday Oo shir uu Dibad joog ka yahay ka dhacayo magaalada Muqdisho
Next articleFarmaajo kursi doon ma ahan ee waa Dhiig doon waa bayaanka iyo Go anka Beesha Hawirye kasoo baxay caaway
Safiirka Maraykanka ayaa goordhaw soosaaray war ku saabsan kulan uu laqaatay musharixiinta qaar wuxuuna sheegay in tanaasul loo baahan yahay si loo helo doorasho...